मन्त्रिपरिषद् बैठकः एनआइडिसी बैङ्कलाई वाणिज्य बैङ्कमा गाभ्ने निर्णय
काठमाडौं । सरकारले एनआइडिसी डेभलपमेण्ट बैङ्कलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमा गाभ्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वाणिज्य बैङ्कलाई थप सवल र सशक्त बनाउन सरकारी स्वामित्वकै एनआइडिसी बैङ्कलाई त्यसमा गाभ्ने..
आईपीओ आबेदनमा जम्मा भएको पैसा अब राष्ट्र बैंकमा राख्नु नपर्ने
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले बजार सुधार गर्ने क्रमलाई अझ अगाडि बढाउँदै प्राथमिक निष्काशन (आईपीओ)को रकम नेपाल राष्ट्र बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाएको छ । धितोपत्र निष्काशन निर्देशिका २०६५ को दफा..
काठमाण्डौ । द्वन्द्वको समयमा विस्थापन भएका सरकारी बैंकका शाखा तुरुन्त पुनःस्थापना नहुँदा सम्बन्धित क्षेत्रका जनताको गुनासोसमेत बढी रहेकाले यस विषयलाई सम्बोधन गर्न अर्थमन्त्रालयले सरकारी बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । हालसम्म पनि..
ग्लोबल आईएमई बैंकले ६ महिनामा ९० करोड ६२ लाख रुपैयाँ नाफा कमायो
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना अर्थात पौष मसान्तसम्ममा ग्लोबल आईएमई बैंकको नाफा बढेर अर्ब नजिक पुगेको छ । गत पुससम्म बैंकले ९० करोड ६२ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ..
कैलाश विकास बैंकको ६ महिनामा नाफा दोब्बर बढेर साढे २६ करोड रुपैयाँ
काठमाडौं । कैलाश विकास बैंकको चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा नाफा दोब्बर बढेर २६ करोड ३८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । चालु आवको पहिलो त्रैमाश असोजसम्म बैंकको नाफा १३ करोड..
सानिमा बैंकले ६ महिनामा नाफा ६२ करोड रुपैयाँ, निष्कृय कर्जा शुन्यमा झार्यो
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सानिमा बैंकको नाफा बढेको छ ।पुससम्म बैंकको नाफा ६२ करोड २४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । चालु आवको असोजसम्म बैंकको नाफा २७ करोड १६..
ग्लोबल आइएमइलाई प्यासिफिक र सनराइज बैकलाई एनआइडिसी क्यापिटल किन्न अन्तिम स्वीकृति
काठमाडौ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चार वटा बैंकलाई एक आपसमा गाभिनको लागि अन्तिम स्वीकृति दिएको छ। बैंकको सोमबार बसेको सञ्चालक समिति वैठकले अन्तिम स्वीकृति दिएको हो। ग्लोबल आइएमइ बैकलाई प्यासिफिक डेभलपमेन्ट बैंक..
रसुवाको कालिकास्थानमा बिभोर सोसाइटी डेभलपमेन्टको ४४ औं शाखा
रसुवा । दक्षिणी रसुवाको कालिकास्थानमा बिभोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंकको ४४ औँ शाखा सञ्चालनमा आएको छ । यसअघि रसुवाकै धैबुङमा बैंकले ४३ औँ शाखा विस्तार गरिसकेको बैंकका सञ्चालक हरिप्रसाद रिमालले जानकराी दिनुभयो..
नेपाल बंगलादेश बैंकले ६ महिनामा ५४ करोड रुपैयाँ नाफा कमायो
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको अर्धिवार्षिक अवधिमा नेपाल बंगलादेश बैंकको नाफा बढेको छ । पुससम्म बैंकले ५४ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ । चालु आवको असोजसम्म बैंकको नाफा २२ करोड ५०..
आरबीबी र एनआइडीसीको मर्ज प्रस्ताव अबको मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्ने : अर्थमन्त्री महरा
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र एन.आइ.डि.सी. डेभलपमेण्ट बैंकको मर्जको निर्णय अवको मन्त्रिपरिषद बैठकले गर्ने वताएका छन् । “मर्जर गर्ने मन्त्रालयको प्रस्तावमा मैले हस्ताक्षर गरिसकेँ ।..
भक्तपुरका भुकम्प पीडितलाई पहिलो किस्ता कुन कुन बैङ्कबाट वितरण हुँदै
भक्तपुर । भक्तपुरका ६ ओटा नगरपालिकाका भूकम्पपीडित ९लाभग्राही०लाई माघ १० गते सोमवारदेखि पहिलो किस्ताको अनुदान रकम रू। ५० हजार वितरण गरिने भएको छ । जिल्लाका १८ हजार लाभग्राहीका लागि सरकारले..
मेगा बैंकले खुद मुनाफा ६५ प्रतिशतले वृद्धि गरी ६ महिनामा ३७ करोड रुपैयाँ कमायो
काठमाडौ । मेगा बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष २०७३-७४ को दोसो त्रैमासमा खुद मुनाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६५.९२ प्रतिशतले वृद्धि गरी ३७ करोड ९ लाख रुपैयाँ कमाउन सफल भएको छ..
सिद्धार्थ बैंकको दोश्रो त्रैमासिक नाफा ७२ करोड ६० लाख रुपैया
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाशमा नाफा दोब्बर बढाएको छ । चालु आवको कात्तिकदेखि पुससम्म ३ महिनामा नाफा ३६ करोड बढाएर ७२ करोड ६० लाख ३७ हजार..
प्राइम कमर्सियल बैंकले ६ महिनामा मुनाफा १९ प्रतिशतले बृद्धि गरी ५६ करोड रुपैया कमायो
काठमाडौं । प्राइम कमर्सियल बैंकले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा आफ्नो खुद मुनाफालाई १९ .२८ प्रतिशतले बढाउन सफल भएको छ । बैंकले दोस्रो त्रैमासमा खुद मुनाफा ५५ करोड ९७ लाख..
मेगा बैंक र टुरिजम डेभलपमेण्ट बैंकबीच मर्जर सम्झौता, स्वाप रेशियो पनि टुंगियो, मर्जरपछि पूँजि ८ अर्ब पुग्ने
काठमाडौं । मेगा बैंक र टुरिजम डेभलपमेण्ट बैंकले राष्ट्र बैंकले तोकेको पूँजी पुर्याउनका लागि एकआपसमा मर्जमा जाने सम्झौता गरेका छन् । केही सातादेखि दुई बैंकका बीचमा मर्जरका सम्बन्धमा छलफल चलेकोमा बिहीबार..
नेपाल बैंकले २४ प्रतिशत हकप्रद शेयर दिने, बिक्री प्रबन्धकमा सिभिल क्यापिटल
काठमाडौं । नेपाल बैंकको ५६ औं वार्षिक साधारण सभाबाट पारित भए बमोजिम बैंकले आफ्ना शेयरधनीहरुलाई १०ः२.३७ अर्थात १०० कित्ता शेयर बराबर २३ दशमलब ७४ कित्ता हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने भएको..
साढे ८ अर्ब पूँजि भएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ३० प्रतिशत साधारण सेयर निष्कासन गर्ने
काठमाडौं । सरकारको पूर्ण स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सर्वसाधारणका लागि ३० प्रतिशत साधारण सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्र सेयर निष्कासनको तयारी पूरा गर्ने लक्ष्य बैंकले लिएको छ..
​कृषि विकासले मोबाईल बैंकिङ सेवा शुरु गर्ने
काठमाडौं । कृषि विकास बैंकले मोबाइल बैंकिङ सेवा सुरु गरेको छ। बैंक र एफ वान सफ्ट इन्टरनेसनलबीच मोबाइल बैंकिङ सेवा दिने सम्वन्धमा सम्झौता भएसँगै सेवा सुरु भएको बैंकले जनाएको छ।..
ओम डेभलपमेन्ट बैंकले ६ महिनामा १९ करोड खुद नाफा कमायो
काठमाडौं । ओम डेभलपमेन्ट बैंकले चालु आर्थिक बर्षको दोस्रो त्रैमास अर्थात पौष मसान्तसम्ममा १९ करोड २ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा गरेको छ । बैंकले यसअवधिसम्ममा १२ अर्ब ९८ करोड निक्षेप संकलन..
कर्जा असुलीमा प्रगति गर्दा प्रभु बैंकले ६ महिना मै १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ नाफा
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो तैमाससम्म अर्थात ६ महिनामा प्रभु बैंकको नाफा १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ । बैंकले निष्क्रिय कर्जा असुलीमा जोड दिएपछि चालु आवको पुससम्म..
सानिमा बैंकले बागमती डेभलपमेन्टलाई गाभेर थाल्यो एकिकृत कारोबार
काठमाडौं । सानिमा बैंक लिमिटेडले बागमती डेभलपमेन्ट बैंकलाई प्राप्ति पश्चात शुक्राबारबाट एकिकृत कारोबार थालेको छ । प्राप्ति पश्चात बैंकको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सानिमा बैंकले..
स्टान्डर्ड चार्टर्डले प्रति सेयर १२९० रुपैंयामा साढे २५ लाख कित्ता एफपिओ निष्काशन गर्ने
काठमाडौं । स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले पूँजी वृद्धिका लागि निष्काशन गर्न लागेको थप नयाँ सेयर ९एफपिओ० को मूल्य निर्धारण गरेको छ । बैंकको विहिबार बसेको सञ्चालक समितिको ३५० औ बैठकले एफपिओको..
लक्ष्मी बैंकको ३८ प्रतिशत बोनस सेयर दिने प्रस्ताव
काठमाडौं । लक्ष्मी बैंकले ३८ प्रतिशत बोनस सेयर दिने प्रस्ताव गरेको छ । बुधबार बसेको बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । एक्वायर गरेको प्रोफेसनल दियालो बिकास बैंकबाट..
ग्लोबल आईएमई बैंक र मास्टर कार्डबीच सम्झौता
काठमाडौं । ग्लोबल आईएमई बैंक र मास्टर कार्डबीच मास्टर कार्ड वितरणका लागि प्रशोधन सेवा पु¥याउने विषयमा सम्झौता भएको छ । सम्झौता पत्रमा ग्लोबल आईएमई बैंकका वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनक..
लघुवित्तले १८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘घ’ वर्गका लघुवित्त संस्थाको अधिकतम ब्याजदर तोकेको छ । अब लघुवित्तले कर्जामा १८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाउनेछैनन् । राष्ट्र बैंकले मंगलबार निर्देशन जारी गर्दै कोषको..
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक पारित
काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक, २०७३ लाई बहुमतले पारित गरेको छ । यस अघि बैठकमा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत..
टुरिजम बैंकले दुई विकास बैंक किन्यो, एकीकृत कारोबार आइतबारदेखि
काठमाडौं । टुरिजम् डेभलपमेन्ट बैंकले सिन्धुलीको मातृभूमि र दोलखाको कालिञ्चोक विकास बैंकलाई गाभेर पुस २४ गते आईतबारदेखि एकिकृत कारोबार थाल्ने भएको छ । हाल टुरिजम् बैंकको चुक्ता पूजीँ ७८ करोड ६९..
नक्कली सुन धितो कर्जा बनाएर नौ करोड ठग्ने पक्राउ
Posted on Jan 05 2017
काठमाडौं । सुनसरीको धरानस्थित सेञ्चुरी बैंकको शाखा कार्यालयमा कीर्ते कागज बनाई करोडौँ रकम घोटाला गर्नेलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न थालेको छ । एक वर्षअघिदेखि उक्त बैंक घोटाला प्रकरण चर्चामा रहँदै आएको..
पाँच बैंक गाभिए एनसीसी बैंकमा, ९६ शाखा, १ हजार कर्मचारी
काठमाडौं । नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंक, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक, सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंक र इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंकबीच आइतबार एकीकरण भएको छ। बैंकको बागबजार स्थित कर्पोरेट कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा..
लिखु-२ आयोजनालाई ६ वित्तीय संस्थाले ४ अर्व ५१ करोड लगानी गर्ने
काठमाडौं । ग्लोबल हाईड्रोपावर एसोसिएट प्रालिको प्रवर्धनमा निर्माणाधिन ३३.४ मेगावटको लिखु-२ आयोजनाका लागि लगानी जुटेको छ । उक्त आयोजनामा माछापुच्छ्रे वैंकको अगुवाइमा ६ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ४ अर्व ५१..
Results 1896: You are at page 28 of 64